Abuukaate/ Looyar - HEL
Nooca Shaqada	Labada gelin
Anigoo ah muwaadin Soomaaliyeed bartay abuukaatenimo dhameeyay Jaamacada Umada Soomaaliyeed, waxaan jeclahay inaan u adeego Umadda Soomaaliyeed. Waxan ahay shaqsi aad u degan, akhlaaq iyo diin intaba leh.
Waxaan kuugu adeegayaa muwaadin si daacad ah, eexasho la’aan ah. Wax laaluush ama isdaba marin ahna kuma shaqeyn doono.
Hadii aad tahay qof la dulmiyay, guri laga dhacay ama beer iyo wlm . Fadlan ilasoo xiiriir waxaan Ilaah idinkiisa kuusoo dhicin doonaa waxa kaa maqan ee aad xaqa u leedahay.
Igalasoo xiriir bogaan ama Tell.0620232323
29	#2444	01/06/2021